Cunnooyinka jikada waa degel u heellan adduunyada caloosha. Halkan waxaad ka heli doontaa suxuunta asalka ah, cuntooyinka munaasabadaha gaarka ah, sida dhalashada ama kirismaska. Laakiin intaas oo keliya maahan, laakiin waxaad sidoo kale heli doontaa macluumaad aad u tiro badan oo ku saabsan suxuunta dhinaceeda, cabbitaannada, cuntada iyo talooyinka si fiican loo kariyo.
Maqaallada iyo qeybaha hoos ku qoran waxaa qoray koox shucuur qorayaal ah oo adiga oo kale ah, isla markaana jecel adduunka cunnada iyo karinta. Waxaad wax badan oo iyaga ku saabsan ka baran kartaa bogga kooxda tifaftirka.
Murti iyo Murugo
Talooyin Muuqaal ah
Marar gaar ah
Cunnooyinka loogu talagalay Carnival
Cunnooyinka loogu talagalay Halloween
Cunnooyinka miraha leh
Cunnooyinka Weelka Side
Cunnooyinka Mashiinka iyo maraqa
Tabaaska iyo iskudhafka